Mourinho Oo Magacaabay Xiddigii Uu Ka Murugooday Inuu Ka Hadho Tartanka Euro - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMourinho Oo Magacaabay Xiddigii Uu Ka Murugooday Inuu Ka Hadho Tartanka Euro
Mourinho Oo Magacaabay Xiddigii Uu Ka Murugooday Inuu Ka Hadho Tartanka Euro
July 2, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta 2
Jose Mourinho ayaa qirtay inuu ka niyad-jabay, in indhihiisu qabtaan in tartanka qaramada Yurub ee Euro uu ka hadho laacib uu jeclaan lahaa inuu kusii jiro oo waddankiisa lagu garaacay wareeggii 16ka.
Tababaraha reer Portugal ayaa inta uu socdo tartanka Euro waxa uu kasoo muuqdaa talkSPORT oo uu ka shaqeeyo ayaa waxa uu si dhow ula socday ciyaartii xulka qaranka France kaga hadhay tartanka Euro ee rikoodheyaasha ay ku reebtay Switzerland, taas oo ciyaartii caadiga ahayd kusoo dhamaatay 3-3 oo uu laba gool dhaliyey Karim Benzema.
Kylian Mbappe ayaa ciyaartaas khasaariyey rikoodhihii uu dalkiisu ku hadhay, laakiin laacibka sida weyn u muuqday ayaa ahaa weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema.
Mourinho oo soo layliyey Benzema xilligii ay wada joogeen Santiago Bernabeu ayaa sheegay inuu ka xumaaday in laacibkani uu ka hadho tartanka, waxaanu yidhi: “Benzema ayaa ah sababta aan uga murugooday in France aanu usoo gudbin wareegga xiga, sababtoo ah waxaan u malaynayay in Benzema uu ugu dambayn heli doono fursad uu ugu guuleysto Kubad dahab ah ama wax kale.”
Tababaraha reer Portugal waxa uu amaanay Benzema, isagoo yidhi: “Waa ciyaartoy cajiib ah oo si fiican u ciyaarayay iyadoo uu cadaadis weyni saaran yahay, sababtoo ah marka aad kusoo laabato kooxda qaranka waxa fuulay culays weyn, si cajiib ahna wuu u ciyaaray.
“Goolkiisii hore ee uu ka dhaliyey Switzerland wuxuu ahaa heersare sababtoo ah Mappe baaska Mbappe ma ahayn mid fiican, waxaanu daba dhigay kubadda laakiin taabashada lugta bidix ee Benzema ee uu kubadda xaga hore ku geystay iyo sidii uu goolhayaha ugu dhaafiyey taabshada bidix ayaa farsamo ahaan gool cajiib ah ka dhigaysay. Wuxuu ahaa laacib heersare ah.”
Tuug xun weeyaan mourinho xaasidna ah waliba Markii uu joogay Realmadrid benzema bench ayu galin jiray isagoo dalbanayay Weerar 9 ah. Zidane oo sporting director ahaa iyo florentino perez aya ku qasbay inuu ciyaarsiiyo karim. Ee haddaynan labadaas maamul aynan jeclayn benzema Mourinho kooxda wuu ka diri benzema sida uu bench ugu dilayo. Hadduu ammaan badhabdhaq lasoo leeyahay. Waa ninka yidhi Mctominey aya ka xariifsan pogba United marku joogay. Mourinho ciyaartoyga dadku jecel yihiin waa ku xaasid.
Mourinho intaan aqaanay wax fiican kuma aqoon waxay ila tahay in uu yahay shaqsiga dadka kubada aqoonta uleh ciyaarana aaay wada necebyahiin calaa iyo kuli xaal Mou Waaa ilmo Xaaran